Ubungakanani Bokusasazwa Ngaphandle?
Iiparameter eziqhelekileyo zokuhanjiswa kwamathuba ziquka intetho kunye nokuphambuka okuqhelekileyo. Intetho inika umlinganiselo weziko kunye nokuphambuka okuqhelekileyo kuchaza indlela ukusasazeka ngayo ukusasazwa. Ukongeza kule mimiselo eyaziwayo, kukho ezinye ezenza ingqwalasela kwimimandla ngaphandle kokusasazeka okanye isikhungo. Enye imilinganiselo enjalo yiyo ye- skewness . I-Skewness inikeza indlela yokufakela ixabiso lokubala kwi-asymmetry yokusasazwa.
Olunye ulwabiwo olubalulekileyo esiza kuhlolisisa lukwabiwa ngokubonakalayo. Siza kubona indlela yokubonakalisa ukuba ukusabalalisa ukusabalalisa okubonakalayo kuku-2.
Uxinzelelo lobungakanani bokuba ngumsebenzi
Siqala ngokuchaza umsebenzi wokunqongophala kokunikezelwa kwempahla. Le ntlawulo nganye ineparameter, ehambelana neparameter ukusuka kwinkqubo ehambisana nePoisson . Sichaza oku kuhanjiswa njenge-Exp (A), apho iA parameter. Umsebenzi wokunqongophala kwalolu hlobo ngu:
f ( x ) = e- x / A / A, apho x ingabonakaliyo.
Nantsi e isigxina seemathem e e malunga ne 2.718281828. Ukutshintsha kunye nokuphambuka okuqhelekileyo kokusabalalisa okubonakalayo Exp (A) zombini ihambelana neparameter A. Enyanisweni, ukutshintsha okuqhelekileyo kunye nokulingana okuqhelekileyo bobabini bilingana no-A.
I-Skewness ichazwa yintetho ehambelana nomzuzwana wesithathu malunga nentsingiselo.
Eli binzana lixabiso elindelekileyo:
E [(X - μ) 3 / σ 3 ] = (E [X 3 ] - 3μ E [X 2 ] + 3μ 2 E [X] - μ 3 ) / σ 3 = (E [X 3 ] - 3μ ( σ 2 - μ 3 ) / σ 3 .
Sithatha indawo ye-μ kunye ne-A, kwaye umphumo kukuba u-E [X 3 ] / A 3-4.
Konke okuseleyo kukubala umzuzu wesithathu malunga nomvelaphi. Kule nto kufuneka sidibanise oku kulandelayo:
Lo mbandela unomlinganiselo ongaphantsi komnye wemida yawo. Ngaloo ndlela unokuhlolwa njengoluhlobo olungalunganga. Kwakhona kufuneka simisele ukuba yeyiphi indlela yokudibanisa ukusebenzisa. Ekubeni umsebenzi wokudibanisa ngumkhiqizo womsebenzi we-polynomial kunye nokucacisa, kuya kufuneka ukuba sisebenzise ukuhlanganiswa ngamalungu. Le ndlela yokudibanisa isetyenziswa maxesha amaninzi. Isiphumo sokuphela kukuba:
E [X 3 ] = 6A 3
Siya kudibanisa oku kunye nokulingana kwethu kwangaphambili kwi-skewness. Siyabona ukuba u-skewness ngu-6 - 4 = 2.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba isiphumo sizimeleyo ngokusasazwa okucacileyo esikuqalayo. Ubungqina bokusabalalisa okubonakaliswayo aluxhomeki kwixabiso leparameter A.
Ukongezelela, sibona ukuba umphumo ubungqina obuhle. Oku kuthetha ukuba ukuhanjiswa kuyabhalwa ngakwesokudla. Oku akufanele kumangaliswe njengoko sicinga ngomfanekiso wegrafu yenkqubo yokuxinwa kwemisebenzi. Zonke ezo mpahla zithatha i-1 // itta kunye nomsila oya ngasekunene kwegrafu, ehambelana nemilinganiselo ephakamileyo ye-variable x .
Ngokuqinisekileyo, simele sikhankanye ukuba kukho enye indlela yokubala i-skewness.
Singasebenzisa umzuzwana owenza umsebenzi wokwabiwa okubonakalayo. I-derivative yokuqala yexesha elenza umsebenzi ovavanywa kwi-0 lisinika i-E [X]. Ngokufanayo, isithatha sesithathu somsebenzi owenza umsebenzi xa kuhlolwa kwi-0 sinika i-E (X 3 ].
Yintoni iSebenzi yamandla?
Index of Variation Qualitative (IQV)
Izinto ezili-17 ezenzayo kwiKholeji yeKholeji Xa uxatywe
Amazwi angama-200 e-Essential Landscaping amagama
'I-'I' ibhengezwa njani ngesiFrentshi?